Ukuphupha ngo-Amsel Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
"I-Blackbird, i-thrush, i-finch kunye ne-star": ihamba njalo isingqisho se-nursery "Zonke iintaka sele zilapha", ezibhengeza ukuqala kwentwasahlobo. Abantwana badibana ne-blackbird, ethi njengelungu losapho lwe-thrush yenye yezona ntlobo zixhaphakileyo zeentaka zaseYurophu.
Ngaphandle komntla ogqithileyo nakwimpuma ekumazantsi mpuma, i-blackbird, enomzimba, ofana nalowo we-oriole, unokufikelela kubungakanani obufikelela kwiisentimitha ezingama-27, usekhaya kuyo yonke iYurophu. Intaka yengoma iye yaqheleka eNew Zealand nase-Australia. Kuxhomekeka kwimeko yemozulu ohlala kuyo eYurophu, iblackbird yenye yeentaka ezifudukayo ezihlala ebusika emazantsi eYurophu okanye eMntla Afrika.
Ngokuqinisekileyo yonke into el mundo Sele uyibonile i-blackbird enomzimba wayo omnyama okanye omnyama umdaka kunye nephepha elityheli okanye uve i-blackbird eyindoda icula indawo phakathi kuka-Matshi noJulayi. Ngenxa yokuba intaka iyinxalenye yobomi bezilwanyana bemihla ngemihla, ihlala ibonakala emaphupheni, ngakumbi xa umntu esekhaya kwimimandla yasemaphandleni enezilwanyana ezahlukileyo. Kodwa lithetha ntoni kanye kanye iphupha malunga nomnyama?
Ihlungulu linokuphazama ngokulula ngenxa ye-blackbird ngenxa yombala wayo. Ukuba uphuphe unomyayi, jonga inqaku lethu kwisimboli yephupha "unomyayi". Wonke umntu ophuphe ngenqontsonqa, la maphupha aqhelekileyo ngophawu, kunye notoliko olunomdla olunokwenzeka:
1 Uphawu lwephupha «iBlackbird» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Uninzi lweentaka ezimnyama zavela ephupheni, kodwa ngoba?
1.2 Umnyama omnyama ofileyo: ukutolikwa kwephupha
1.3 Iphupha lentaka emnyama
2 Uphawu lwephupha «umnyama" - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «iBlackbird» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «iBlackbird» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iBlackbird» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Uninzi lweentaka ezimnyama zavela ephupheni, kodwa ngoba?
Ukuba ii-blackbirds ezininzi ziye zavela kumntu ophuphayo, oku kuthathelwa ingqalelo kutoliko lwephupha njengokuqinisa isimboli yephupha. Kuxhomekeka kwimeko yangoku yobomi bomphuphi, iintaka zingamela, umzekelo, umzuzu okonwaba ngakumbi, inkululeko enkulu okanye ukufika okunokwenzeka komyalezo omnandi kakhulu.
Umnyama omnyama ofileyo: ukutolikwa kwephupha
Ukuba ubona enye okanye engaphezulu yee-black bird efileyo emaphupheni akho, umbono ngokuqinisekileyo ugcwalisa usizi. Intaka efileyo njengebhanti emnyama ihlala ifihla ukuphela kwenqanaba elithile lobomi, elinokuthi kule meko libe nezinto ezimbi. Nangona kunjalo, alikafiki ixesha lokutshintsha utshintsho lube ngcono.
Iphupha lentaka emnyama
Intaka emnyama inokuvela kwiimeko ezahlukeneyo zamaphupha. Nokuba ibiyinyoni emnyama, unomyayi okanye enye intaka, iphupha elinje lingabonisa inkululeko kunye nobuchule bokuyila, kodwa kunye neendawo ezimnyama zobuntu okanye isilumkiso.
Uphawu lwephupha «umnyama" - ukutolikwa ngokubanzi
Kangangeenkulungwane, abantu bebekhathazekile luphawu lweentaka kwaye ngakumbi umnyama omnyama. Kule ntsomi, kokubini kubomi bokwenyani nasemaphupheni, intaka iyatsala ithamsanqa kwaye ihlala ibaleka ukwenzakala okuzayo.
Kwixesha elidlulileyo, abantu babecinga ukuba intaka emnyama inento yokwenza nomlingo kwaye bade bayijonge le ntaka njengeqabane lamagqwirha. Nokuba le nkolelo ithandwayo, umzekelo ngobugqwirha, iphelelwe lixesha, i-blackbird isenokusetyenziswa njengomfanekiso wephupha. Uphawu lwethamsanqa ukubonwa njenge. Kunjalo ke nakutolikwa kwamaphupha njenge Iindaba ezimnandi zomthunywa ubonile okanye ubhengeze isigqibo. Oku kutolika kufana nokuphupha kweblackbird kubonakala ngokukodwa xa intaka icula ephupheni.
Ngamanye amaxesha iphupha linokuthetha ngokuchaseneyo, oko kukuthi, ujongene nenxalenye ethile yobomi bakho. abanelisekanga. Unokufuna into ongayifumaniyo.
Ngamanye amaxesha uphawu lwephupha lukwathetha ukuba umntu angathanda ukuba sezicathulweni zomnye umntu kuba emva koko bayazithanda ngakumbi kwaye banokufumana ubomi ngempumelelo ngakumbi. Iphupha le-blackbird lisenokuthatha ukujika okuqinisekileyo, kuba umfanekiso wephupha uhlala ukubonisa indlela yakho Ubuthathaka kumandla yenza kwaye ube ngumntwana onethamsanqa.
Ukuba uphupha ngentaka emnyama ephaphazelayo, kungekudala uza kuzifumana ukwimeko, ukuba mkhulu kangakanani. inkalipho ifunwa kuwe. Ukuba ii-blackbirds ezininzi zibonwa ephupheni, mhlawumbi imeko yakho yobomi iya kuphucuka kungekudala.
Ngamaxesha athile, kodwa kuphela kwiimeko ezinqabileyo, intaka iyaqondwa njengomthunywa we ukufa, ukuze ukufa kube nentsingiselo yokomfuziselo. Oku kutolikwa kwamaphupha akuqondwa ngokwenyani ukuba kuthetha ukuba umntu uza kufa kungekudala, ke emva kwephupha akufuneki ukhathazeke.
Uphawu lwephupha «iBlackbird» - ukutolikwa kwengqondo
Ubumnyama obumnyama buhlala buquka isithunzi sikaYehova ekuchazeni amaphupha ezengqondo. ubuntu bakho. Kwelinye icala, ezi kunokuba ziimpawu zomntu kunye neepropathi ezingazixabisiyo ngokwazo.
Kwelinye icala, umfanekiso wephupha ungabhekisa kwimikhosi nakwizakhono ezisemthunzini kuba ukuphupha akukazibonakalisi kukodwa kungoko kungazisebenzisi.
Ngapha koko, umnyama ubonakalisa into enjalo. Ibhinqaokukuye wonke umntu. Ngokuyinxenye, uphawu lwephupha kufuneka luqondwe njengophawu lokuba iphupha, nokuba liyindoda okanye libhinqa, kufuneka lihlawule ngakumbi kwezi zinto zobufazi.
Uphawu lwephupha «iBlackbird» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwimbono yokomoya, i-blackbird ihlala iboniswa njengomfanekiso wephupha. Iindaba ezimnandi zasemoyeni ephupheni, nto leyo ekufuneka eyamkele ngokwakhe.